Kooxaha Premier League ayaa isku diyaarinayo sidii ay dib ugu bilaaban lahaayeen kulamada saaxiibtinimo ee garoomada. - Somgoal
Home Premier league Kooxaha Premier League ayaa isku diyaarinayo sidii ay dib ugu bilaaban...
Ku ciyaarista garoomada maran waxay u noqonaysaa wax caado u ah dadka kubbadda cagta xiiseeyo, marka waxaa laga yaabaa inay ufiicantahay inay bilaabaan sidii ay ula qabsan lahaayeen.
Taas ayaa laga yaabaa inay tahay sababta ka dambeysa in kooxo badan oo Premier League ah ay tababar ku qaataan garoonkooda isbuucaan, iyadoo kooxo ka mid ah ay ciyaarayaan kulamo saaxiibtinimo si ay ula qabsadaan ciyaartoydooda ciyaaraha soo socda.
Premier League ayaa lagu wadaa inuu dib u bilaabo ciyaaraha albaabada u xiranyahiin laga bilaabo 17-ka Juun ka dib markii la hakiyey tan iyo 13-kii Maarso sababtoo ah cudurka faafa ee coronavirus.
Previous articleKooxda Tottenham ayaa xaqiijisay in kooxdeeda laga helay caabuqa Coronavirus.
Next articleRaheem Sterling, Jadon Sancho, Trent Alexander-Arnold & Marcus Rashford oo lagu soo daray liistada kuwa ugu qiimaha badan.